musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Haiti Kuputsa Nhau » Kudengenyeka kwenyika kuHaiti kwakauraya vanopfuura mazana gumi nemana
Caribbean • Haiti Kuputsa Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kudengenyeka kwenyika kuHaiti kufa - mufananidzo nerubatsiro rwe @aliceexz - twitter
Zvivakwa zvakadonha hazvisi marara, vana vakaparadzaniswa nevabereki vavo, uye Tropical Storm Nyasha inogona kuunza kunaya kwakanyanya kuchichinja kuva mafashama nekukoromoka kwepasi mushure mekudengenyeka kwenyika kukuru 7.2 kuHaiti nemugovera, Nyamavhuvhu 14, 2021. Nhasi, huwandu hwevakafa hwasvika chiuru nemazana mana .
Dzimba dzinopfuura zviuru zvitanhatu dzakagadziriswa, uye kune vanhu vangangosvika mazana matanhatu nemazana mapfumbamwe vakakuvara.
Mutungamiriri weHaiti Ariel Henry akataura chiziviso chemwedzi mumwe chete.
Pamusoro pekudengenyeka kwenyika, Haiti iri kutarisana nemhirizhonga yezvikwata uye kuurayiwa kweMutungamiri wenyika, Jovenel Moise, uyo akapfurwa ndokufa mumba make kweinopfuura mwedzi wapfuura.
Kudengenyeka kwenyika kwakarova kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenyika kwakasiya mamwe maguta aputswa zvachose uye zviuru zvisina pekugara. Dzimba dzinopfuura zviuru zvitanhatu dzakagadziriswa, uye kune vanhu vangangosvika mazana matanhatu nemazana mapfumbamwe vakakuvara, vazhinji vacho vakamirira kuchipatara. Vazhinji vevakakuvadzwa vari kutarisana nemukana wekutapukirwa uchinamira kunze kwezvinhu pasina kurapwa.
mufananidzo nerubatsiro rwe obama.org
Les Cayes taundi pamhenderekedzo yaive zvakanyanya kukuvara kubva mukudengenyeka kwenyika nemhuri zhinji dzakaturika pazvinhu zvavaigona kununura sezvo vakapfuura nehusiku vari panze.
Mamiriro emwedzi mumwe ekukurumidzira akaziviswa neMutungamiri weHaiti Ariel Henry. Mutungamiriri akadaidzira "kubatana kwakarongeka" achifunga nyonganiso yekuyedza kwekuyamura mushure mekudengenyeka kwenyika kwakarova makore gumi nemana apfuura.
Rubatsiro rwuri kuendeswa kunzvimbo idzo dzinonyanya kudiwa uye uko zvipatara zvisingakwanise. Kununura ndege dziri kuita ndege dzakawanda dzerubatsiro sezvazvinogona kubva kumaguta akati wandei munyika.
Samantha Power akanzi sa USAID Administrator neMutungamiri weUS Joe Biden kutarisira rubatsiro kubva kuUnited States kuHaiti. Ye 65-nhengo yekutsvaga uye yekununura mishoni iri kutumirwa kubva kuVirginia. Iyo US Coast Guard iri kutakura vanhu vakakuvara pamwe nevashandi vekurapa pamwe nezvikepe pamwe nendege. Chikwama cheSamaria, boka rekubatsira rinogara muNorth Carolina, riri kutumira nyanzvi gumi nhatu dzekupindura njodzi uye makumi matatu nematatu ezvekushandisa zvekukurumidzira.
Sangano reUN World Food Programme riri mushishi yekutumira marori akazara nezvikafu neChipiri.
Chiitiko chematsotsi chiri kuomesa kuyedza, kunyanya kuMartissant, dunhu regungwa kumadokero kweguta guru. Vakuru vaifanirwa kutaurirana nezvikwata zvakabvuma kubvumidza vanhu vaviri zuva nezuva kuti vapfuure.
Pamusoro pechisimba chematsotsi chiri kuenderera mberi, Haiti iri kubata nekuurayiwa kweMutungamiriri wayo, Jovenel Moise, uyo akapfurwa akafa mumba make kweinopfuura mwedzi wapfuura achisiya nyika iri mumhirizhonga yezvematongerwo enyika. Uye pamusoro pazvo, pane chokwadi matambudziko e COVID-19 denda.
Sekureva kweUS Geological Survey (USGS), kudengenyeka kwenyika kwakakura kusvika 5.2 kwakanzwika mushure mekudengenyeka kwenyika, kuchiteverwa nekumwe kudengenyeka kwepfumbamwe kwakatarisirwa zvakanyanya mumazuva anotevera.
Mutungamiri weGuyana Irfaan Ali
Meseji yetariro kubva kuGuyana
Peoples Progressive Party Civic / Guyana yazivisa muTwitter nhasi kuti Hofisi yeGuyana yeMutungamiri wehurumende yazivisa kuti akaundi account yakagadzwa kuti igamuchire zvipo zvekuyamura kudengenyeka kwenyika kweHaiti. Chirevo ichi chakaverengwa muchikamu:
"Tichienderana nekuzvipira kwehurumende kutora matanho nekukurumidza mukugadzirisa kudengenyeka kwenyika kuri kuitika muhanzvadzi yedu yeCARICOM yeRepublic of Haiti, nekutevera nhaurirano yenhare yakanangana neMugovera wadarika pakati paMutungamiriri wenyika Irfaan Ali Mutungamiriri mutsva weHaiti achangogadzwa, Anokudzwa Dr. Ariel Henry, Hofisi yeMutungamiriri wenyika nhasi yagadzira account yekubatsira neRepublic Bank (Guyana) Limited, muzita reCommunity Defense Commission.
"OPM ichange ichishanda pamwe nemasangano edu, masangano akazvimirira nevamwe vanobatsirana navo kuti vakurumidze kuunganidza mari yekubatsira vanhu vokuHaiti.
“Kutsunga kwaGuyana kwekumira takabatana munguva yakanaka neyakaipa nehama nehanzvadzi dzedu dzeCARICOM mudunhu rese kunoramba kwakasimba. Sezvatakaita munguva yakapfuura, tichabatanidza simba uye zviwanikwa kuti tisangane nedambudziko revashandi rekuunza nyaradzo uye zororo kuhama nehanzvadzi dzedu dzechiHatian nekukurumidza sezvinobvira.
"Tinokumbira kuti maGuyanese ari kunze kwenyika abatane mukuedza kwedu kupa rubatsiro rwakakura kuburikidza kana kupindura pamwe chete."